Postano 2.5: Na-agbakwụnye ihe okike na Nhazi maka Ngosiputa Nlekọta Mmadụ | Martech Zone
Anyị na e dere banyere ịtụnanya elekọta mmadụ media iwu emmepe na arena ngosipụta kwadoro site na Postano, onye na-akwado saịtị a. Postano bụ ikpo okwu anyị na-eji iji dozie ogwe ụkwụ ụkwụ anyị nke na-egosipụta ọkwa nke ekwuru banyere ndị na-akwado anyị na mgbasa ozi mmekọrịta. Postano anọgidewo na-azụlite ya onyinye ahịa anya na ntinye ha kacha ọhụrụ, na-aghọ ngwa ngwa na-eduga maka igosipụta onye ọrụ mepụtara ọdịnaya maka egwuregwu, ejiji, ngwa ahịa ngwa ahịa, ntụrụndụ, njem, na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ihe omume.
Ndi LA jiri ya mee ihe ngosi nke Foto Mosaic, mejuputara foto ndi a na-akpado #WeAreAllKings, na ulo ha mgbe ha meriri iko Stanley.
Ntinye mbipute 2.5 nke Postano gụnyere nhọrọ nzacha mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ihe ndezi Style maka ngosipụta ọdịnala, ngosipụta data ọhụụ ọhụrụ, yana nkwalite ngwaahịa ndị ọzọ. Otu mgbakwunye ndị a mepụtara usoro dị elu dị elu maka ụdị iji chọpụta ndị na-akwado ha, ma mezie ngwa ngwa ma bipụta ọdịnaya kachasị mma niile sitere na otu dashboard.
Ijikọta ọdịnaya mmekọrịta site na mkpọsa na gburugburu dị ka ihe omume, ụlọ ahịa mkpọsa, ama egwuregwu, na lobbies na-agbanwe etu akara si amata ndị ọkacha mmasị ha ma mekwaa ndị ahịa ha. Site na nhapụ a, anyị enyela ndị ahịa anyị ụfọdụ ngwaọrụ dị ike iji nyere aka kpughee ihe okike ha. Ndị ahịa anyị na-achọ iwere ngosipụta ngosipụta mmekọrịta ha na ọkwa ọzọ, yana iji atụmatụ ọhụrụ ndị a, ha nwere ike iji ihe okike mee n'echiche ma mepụta ya ma mepụta ahụmịhe otu-nke-ụdị. Justin Garrity, SVP, Postano
Onye ndezi Style - Ntọala nke ngwaọrụ ndozi, nke na-enye ndị ụdị ohere ike iji mepụta ngosipụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịgbanwe ederede, agba, ma họrọ site na ndebiri ndebiri mara mma. Onye nchịkọta akụkọ Style gụnyere onye editọ CSS iji nye ndị na-emepụta weebụ nchịkwa a na-enwetụbeghị ụdị ya banyere ọdịdị na mmetụta nke visualizations ha. The Style Editor gụnyekwara ike itinye ihe oyiyi na fanye onye nkwado ọdịnaya dị ka echiche interstitial na ngosipụta ahụ.
Ọsọ Smart - Nye otutu nzacha nzacha maka gụnyere na ewepu kwuru, hashtags, na isi okwu ndị ọzọ. Smart Streams na-enye ndị ụdị ohere ịhazi ọdịnaya ha n'ụzọ ziri ezi iji melite usoro nke mkpuchi na nhọrọ UGC. Ngwa ọrụ Postano Platform a na-enyere ụdị aka igosipụta agwa ha pụrụ iche na ndị na-ege ntị, ma na-eme ka ịkọ akụkọ ahụ site na iji anya nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mfe.
Ihe ngosi data ohuru ohuru - Ihe ngosi ohuru ohuru nke foto (nke a na-ese n'okpuru), ihe nchọgharị ihe nchọgharị mpaghara iji gbochie njikọ intaneti site na imetụta ngosipụta, ike nhazi nlekọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na mmụba ngwa ngwa.
Ihe ngosi Smart iyi ahụ na-enye ohere maka ụdị iji mepụta ọwa mmiri ahaziri iche maka ọdịnaya ha chọrọ maka mgbasa ozi.
Style Editor na-enye ụdị njikwa zuru oke iji mepụta ma hazie nhụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ngosipụta.
Postano bụ ezigbo oge, usoro ntanetị anya nke na-achọta ma na-edozi ọdịnaya kachasị mma na-elekọta mmadụ ma na-ebipụta ọdịnaya ahụ dị ka ihe ngosi dị egwu n'ofe weebụ, mkpanaka na ngosipụta ihuenyo maka ụlọ ọrụ dịka egwuregwu, mkpọsa, ihe omume na gafere. Postano esorola ụdị ndị ejiri akara mepụta ikpo okwu maka akara na ndị na-egwu egwu iji kọọ akụkọ ha ọnụ. Ndị ahịa Postano gụnyere BCBG, CFDA, Evernote, Google, LA Kings, Oregon Ducks, YOOX, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Tags: achọ hashtagpostanommekọrịta mmadụ na ibe yaonye ọrụ mepụtara ọdịnayangosipụta ngosi
Jul 21, 2014 na 8: 33 AM
Nke a ọ bụ ihe maka ndị na-ede blọgụ kwa ụbọchị dị ka onwe m? Ọ na-echetara m ntakịrị Rebelmouse.
Jul 21, 2014 na 2:04 PM
O yighị ka Gavin - Postano bụ ọkachamara na ụlọ ọrụ nwere ngosipụta ngosipụta ọhụụ, dịka saịtị mkpọsa, ụlọ ọrụ, ihe omume na ọgbakọ, na egwuregwu egwuregwu!